Ibanzi kakhulu igumbi lokulala eli-2 eKyperounda
Indlu entle kakhulu yokulala ye-2 eKyperounta enekhitshi ebanzi kakhulu kunye negumbi lokuhlala. Omabini amagumbi okulala abonelela ngebhedi kaKumkanikazi kunye neendawo ezininzi zokuhlala. Ibekwe kufutshane nendlela enkulu yelali enokufikelela ngokulula kwiziko, iimyuziyam, iindlela zokuhamba, njl.
I-Kyperounta imi kudederhu lweentaba zeTroodos kwaye ikumgama oziikhilomitha ezingama-45 ukusuka eLemesos. Yeyona ndawo ifanelekileyo yokonwabela isiko, uluntu, umoya omtsha, ukubaleka ubushushu ehlotyeni kwaye ukonwabele ikhephu ebusika.
Ikufuphi nemarike encinci ivumela ukufikelela lula kuzo zonke iimfuno. Akukho mfuneko yokuba uphathe nantoni na nawe!
Ilali yasekwa ngamaxesha aseByzantine kwaye ithatha igama layo kwi ‘kypros’ okanye ‘kyperi’, ekhula kakhulu kule ndawo.
Phakathi kwezinto ezinomtsalane yicawe yelali ezinikele kwi-Agia Marina - eyaqala emva ngenkulungwane ye-18- kunye nemyuziyam zayo ezintathu zeMbali yeNdalo, i-Folk Art kunye ne-National Liberation Struggle.
Ezinye iindawo ezinomdla zokundwendwela yi Winery yaseKyperounta kunye neAdventure Park, ngelixa kukho iindlela ezimbini zendalo ezithandekayo zokuhamba; 'Doksa soi o Theos', kunye 'noTeisia tis Madaris'.
Umamkeli uyafumaneka ngamaxesha onke.